Ciidamada Nabad sugidda oo soo qab qabtay Maandooriyaal – Radio Muqdisho
Ciidamada Nabad sugidda oo soo qab qabtay Maandooriyaal
Ciidamada hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ayaa 48saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka sameeyay Holwgallo lagu Uruurinayo waxyaabaha Maanka dooriya taas oo Qatar ku ah Nolosha dadka iyo Sugidda Amniga Caasimadda.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa sheegay in ciidamada Nabad Sugidda ay soo qab qabteen waxyaabaha maanka dooriya oo lagu isticmaalayay mid ka mid ah guryaha ku yaalla muqdisho isla markaana lagu abuurayay Guri ka mid ah guryaha magaalada.
“Ciidamadda Nabad Sugidda uma diyaar sana oo qura in ay la dagaallaman kooxda Shabaab ee waxa ay sidaasi si la mid ah ula dagaallamayaan cidwalba oo lagu helaa nuucyada Xashiishka, Calaqa iyo maandooriyaasha kale ee Qatarta ah” ayuu yiri Afhayeen Maxamed Yuusuf.
Si doo kale ciidamadda hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka qaranka waxa ay si Aad ah u baadi goobayaan Dhagar qabashaashii dilay allaha u naxariistee Gabar Soomaaliyeed oo u shaqaynaysay Baarlamaanka Soomaaliya.
Afhayeenka ayaa ugu dambayntii sheegay in ciidamadda Nabad Sugidda iyo Boliiska ay daba joogaan falkaas dadkii ka dambeeyay isla markaana ay ka haridoonin gacan ku dhiiglayaashaas dilay gabadhaas Soomaaliyeed ee iyada oo Aqoon leh u shaqaynaysay dadkeeda iyo dalkeeda.
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta loo Akhrindoono Warbixin la xiriirta Miisaaniyadda Dowladda Sannadkaan
Horjooge Wacyi Galinta Beenta ah Shabaab U qaabilsanaa oo Dowladda isku Soo Dhiibay Maanta +Dhageyso